Izindaba - Ukuhlukaniswa kombani okuvamile.
Kunezinhlobo eziningi zokubanjwa kombani, kufaka phakathi izinsimbi eziboshiwe zensimbi, izinsimbi zomugqa zensimbi eziboshiwe, izintambo zokubopha insimbi ezingenalutho, izibambisi ezihlanganiswe ngci ngokuphelele zensimbi eboshiwe, kanye neziboshwa ezisusekayo.
Izinhlobo eziyinhloko zababanjiwe yiziboshwa eziyizigaxa, izivalo zama-valve nezinsimbi ze-zinc oxide. Isimiso sokusebenza esiyinhloko sohlobo ngalunye lwesiboshwa sombani sehlukile, kepha ingqikithi yabo yokusebenza iyafana, konke ukuvikela ikhebula lezokuxhumana nemishini yokuxhumana ekulimaleni.
I-tubular arrester empeleni iyigebe lokuvikela elinekhono lokucima i-arc ephezulu. Iqukethe izikhala ezimbili zochungechunge. Igebe elilodwa lisemkhathini, elibizwa ngokuthi igebe elingaphandle. Umsebenzi wawo ukuhlukanisa amandla okusebenza nokuvimbela ipayipi lokukhiqiza igesi ukuthi lingagudluki ngepayipi. Owesibili ushiswa amandla okuvuza okuvama imvamisa yamandla; enye ifakwe kwipayipi lomoya futhi ibizwa ngegebe langaphakathi noma igebe lokucisha i-arc. Umthamo wokucisha i-arc we-tubular arrester uhlobene nosayizi wamandla wamandla aqhubekayo wamanje. Lesi yisibambi sombani esivikelayo, esisetshenziswa kakhulu ukuvikela umbani ezintanjeni zokuphakelwa kukagesi.
Uhlobo lwe-Valve arrester
I-valve-type arrester yakhiwe igebe le-spark kanye ne-valve plate resistor. Okokusebenza kwe-valve plate resistor kukhethekile i-silicon carbide. Isiphikisi se-valve chip esenziwe nge-silicon carbide singavimbela ngempumelelo umbani namandla aphezulu, futhi ivikele nemishini. Lapho kunamandla amakhulu ombani, igebe le-spark lidiliziwe, inani lokumelana nokwehla kwepuleti le-valve liwa, kanye nombani wamanje ufakwa emhlabeni, ovikela ikhebula noma okokusebenza kukagesi ekulimaleni kombani wamanje. Ngaphansi kwezimo ezijwayelekile, igebe le-spark ngeke lidilizwe, futhi inani lokumelana nokuphikiswa kwepuleti le-valve liphezulu, okungeke kuthinte ukuxhumana okujwayelekile kolayini wokuxhumana.
I-Zinc oxide lightning arrester iyithuluzi lokuvikela umbani elinokusebenza okuphezulu kokuvikela, isisindo esincane, ukumelana nokungcola kanye nokusebenza okuzinzile. Isebenzisa kakhulu izici ezinhle ezingekho emgqeni we-volt-ampere we-zinc oxide ukwenza ukuthi ukugeleza kwamanje kudlule kusigaxa kube kuncane kakhulu (i-microamp noma i-milliampere level) kumthamo wokusebenza ovamile; lapho i-overvoltage isebenza, ukumelana kwehla kakhulu, kuvula amandla we-overvoltage Energy ukufeza umphumela wokuvikelwa. Umehluko phakathi kwalolu hlobo lwesiboshwa kanye nesiboshwa sendabuko ukuthi alinaso igebe lokukhipha futhi lisebenzisa izici ezingekho emgqeni we-zinc oxide ukukhipha nokuphula.
Kuthulwe ababulali abaningana abangaphezulu ngenhla. Uhlobo ngalunye lwe-arrester lunezinzuzo zalo nezimpawu zalo. Kudingeka isetshenziswe ezindaweni ezahlukahlukene ukufeza umphumela omuhle wokuvikela umbani.